Scheme inosimbisa iyo iPhone 7 Plus ine Smart Connector | IPhone nhau
Isu tatoona akati wandei maschematics uye rinopa pane anotevera maPhones, asi hazvitomborwadzi kuona vamwe. Hazvikuvadze nekuti ruzivo rwakawanda rwatinoona nezve chimwe chinhu, ndipo patinonyanya kuva nechivimbo chekuti ruzivo urwu ruchange rwuripo muchishandiso chekupedzisira. Nhasi, 9to5mac atumira zvirongwa zvitsva izvo zvaizosimbisa zvinhu zvakati wandei, kutanga nekuti iyo iPhone 7 uye iyo iPhone 7 Plus / Pro ichave nemipimo yakateedzerwa kune iyo iPhone 6 / 6s iyo yakatangwa muna 2014 na2015.
Zvinoenderana nezvirongwa izvi, iyo iPhone 7 ichave chegumi che millimeter mukobvu kupfuura iPhone 6s (inovawo yaive yakati rebei kupfuura iyo iPhone 6) uye ichave 7.2mm (7.3mm yeiyo Plus modhi). Kune rimwe divi, zvirongwa izvi zvaizosimbisa chakavanzika chakavanzika chekuti Apple ichabvisa 3.5mm headphone port, inonyanya kunetsa iyo kambani yeCupertino yakasanganisira mumakore apfuura.
Iyo Smart Connector yeiyo iPhone 7 Plus yaizosimbiswa
iPhone 7 Plus kana Pro
Mumifananidzo tinoona akati wandei zvinonakidza, asi izvo zvinoita kuti tifunge kuti pane chimwe chinhu chisingakodzere: chinhu chekutanga ndechekuti iyo 7-inch iPhone 4.7 ine vatauri vaviri. Dambudziko neiri nderekuti iyo "yakajairika" modhi idiki uye yakachipa pane iyo Plus modhi, saka zvinogona kushamisika kuona wechipiri mutauri pane 4.7-inch modhi uye kwete iyo 5.5-inch modhi. Chinhu chechipiri chakamira ndechekuti kumberi kweiyo iPhone 7 Plus / Pro haina chidzitiro chakanyatsoratidzwa. Izvi zvinoreva here kuti Apple ichaburitsa iPhone ine skrini iyo yaizosvika munzira dzese kumusoro uye kuzasi kwemakona? Hazvigoneki, kana zvisingaiti.
Kune rimwe divi, iyo iPhone 7 Plus yechirongwa ichi chitsva yaizove neiyo Smart Connector kuti iyo ichangoburwa iPad iyo yakatangwa uye iyo mbiri kamera iyo yakambotaurwa nezvayo mumwedzi yapfuura yatovepo. Ndinoda kutenda kuti madhayagiramu aya anotiudza kuti mafoni anotevera paapuro achataridzika sei, asi mutauri wechipiri mune diki modhi uye kusavapo kwechiratidziro mune iyo Plus modhi kunoita kuti ndisave nechokwadi. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Chimwe chirongwa chinosimbisa iyo iPhone 7 Plus ine Smart Connector; saizi yakafanana ne6s
Zvakanaka Apple Music, yaive yakanaka payakagara ...